မြေပဲစိုက်တောင်သူများမှ စံပြစိုက်ကွက်အား ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးလိုပါက ဆီစက်ပိုင်ရှင်များ အသင်းသို့ ဆက်သွယ်အကူအညီ တောင်းခံနိုင်
Post byသုသု(AMIA) on Wednesday, December 19,2018
အကျိုးတူ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လိုသူများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆီစက်ပိုင်ရှင်များအသင်းသို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဓာတ်ပုံ- မှိုင်းဝေ(AMIA)
မြေပဲအများဆုံး စိုက်ပျိုးရာ တိုင်းဒေသကြီးများတွင် တောင်သူများနှင့် ပူးပေါင်း၍ စံပြစိုက်ကွက်များ စိုက်ပျိုးခြင်း အား ကန်ထရိုက်စနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ဆီစက်ပိုင်ရှင်များအသင်းသို့ ဆက်သွယ်အကူ အညီ တောင်းခံနိုင်ကြောင်း အသင်း၏ ဥက္ကဌ ဦးခင်စိုးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မြန်မာနိင်ငံ ဆီစက်ပိုင်ရှင်များအသင်းအနေဖြင့် မြေပဲ စံပြစိုက်ကွင်းများကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မတ္တရာ မြို့နယ်တွင် ဧက ၅၀ ခန့် ၊ မြင်းခြံမြို့နယ်တွင် ဧက ၃၀၀ ခန့်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့နယ်တွင် ဧက ၃၀ ခန့်ကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင်၊ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဘန်းယဉ် ကျေးရွာ၊ ကယာပြည်နယ်၊ ကရင်ကျေးရွာအုပ်စု ဆင်ဖြူကျေးရွာတို့တွင် ဘိန်းအစားထိုး သီးနှံအဖြစ် မြေပဲ စိုက် ပျိုးနိုင်ရေးကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ ဆီထွက်သီးနှံ စိုက်ပျိုးတဲ့ ဒေသတွေမှာ တောင်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ Pilot project တွေ ခွဲပြီးတော့ စိုက်ပျိုးနေသလို မြေပဲစိုက်နည်းတွေ ရရှိအောင် ထိုင်ဝမ်နဲ့ တရုတ်ပညာရှင်တွေ ခေါ်ယူပြီးတော့ ဆွေးနွေး တာ တွေ ဆောင်ရွက်ပေးနေသလို တောင်သူတွေကိုလည်း ပြည်ပခရီးတွေ စေလွှတ်ပြီးတော့ လေ့လာရေးခရီးတွေ စေလွတ်သလို နောက်ထပ်လည်း စေလွတ်နိုင်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေတယ်” ဟု ဦးခင်စိုးက ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ပြည်တွင်း ဆီနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ ဖူလုံရေး၊ ကျမ်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အရည်အသွေးမီ စားသုံး ဆီများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေး၊ ပြည်တွင်းဆီစက်များ၏ လုပ်ငန်းများ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးတို့အတွက် ရည် မှန်းချက်ထား ဖော်ဆောင်နေကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ထို့ပြင် မြေပဲစိုက်ပျိုးရေးမှ စိုက်ပျိုးတောင်သူများ၏ အဓိကလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ရရှိရေး ၊ စိုက်ပျိုးနည်းပညာကောင်းများ ရရှိရေး၊ စွမ်းအားပြည့် စက်ကိရိယာများ သုံးစွဲနိင်ရေး၊ ထိရောက်သော သွင်း အားစုများ သုံးစွဲနိင်ရေးနှင့် ဈေးကွက်အာမခံချက် ရရှိနိင်ရေးတို့အတွက် စိုက်ပျိုးတောင်သူများအား ပံ့ပိုး ကူညီမှု များ လုပ်ဆောင်ပေအးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိတွင် ကသာခရိုင်အတွင်း၌ ဆီထွက်သီးနှံ စိုက်ဧက ကိုးသောင်းခွဲကျော် ရှိပြီး နှစ်စဉ် တစ်ဧက အထွက် နှုန်း တင်း ၄၀ ခန့်သာ ထွက်ရှိကြောင်း ကသာခရိုင်ရှိ ဒုတိယခရိုင်မှူး ဦးကျော်စွန်ဌေးက ဆိုသည်။
“ အသင်းဘက်ကနေ နည်းပညာ၊ စက်နဲ့ ငွေကြေး ပံ့ပိုးမှုတွေ လိုအပ်တယ်။ တောင်သူတွေကလည်း မြေပဲနဲ့ ပတ်သက်တာ အသင်းဘက်ကနေ ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင် ၀င်ငွေတိုးပွား လာဖို့နဲ့ မျိုးစေ့လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်ဆည်းလာနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးသည့် မြေပဲအမျိုးအစားများမှာ စိပန်၊ ရေဆင်း ၇၊ သိပ ၁၂၁၊ ထွန် တာနီ၊ ကျောင်းကုန်း၊ ဂျပန်ကြီး၊ ဆင်းပဒေသာ( ၇၊၈၊၉) မကွေးပင်ပြန့်နှင့် မကွေးမျိုး( ၁၀၊၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊၁၅) မျိုးတို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြေပဲ အစိုက်များဆုံး စိုက်ပျိုးသည့် ဒေသများမှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းဘူးမြို့၊ စလင်းမြို့၊ ပခုက္ကူမြို့၊ ရေစကြိုမြို့၊ မြောင်မြို့တို့ဖြစ်ကြပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ အင်ပင်မြို့၊ ကြံခင်းမြို့၊ မြန်အောင်မြို့ စသည့် ဒေသများ၌လည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။
မွပေဲအမြားဆုံး စိုကျပြိုးရာ တိုငျးဒသေကွီးမြားတှငျ တောငျသူမြားနှငျ့ ပူးပေါငျး၍ စံပွစိုကျကှကျမြား စိုကျပြိုးခွငျး အား ကနျထရိုကျစနဈဖွငျ့ စိုကျပြိုးလုပျကိုငျလိုပါက မွနျမာနိုငျငံ ဆီစကျပိုငျရှငျမြားအသငျးသို့ ဆကျသှယျအကူ အညီ တောငျးခံနိုငျကွောငျး အသငျး၏ ဥက်ကဌ ဦးခငျစိုးက ပွောသညျ။
လကျရှိတှငျ မွနျမာနိငျငံ ဆီစကျပိုငျရှငျမြားအသငျးအနဖွေငျ့ မွပေဲ စံပွစိုကျကှငျးမြားကို မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မတ်တရာ မွို့နယျတှငျ ဧက ၅၀ ခနျ့ ၊ မွငျးခွံမွို့နယျတှငျ ဧက ၃၀၀ ခနျ့၊ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး မုံရှာမွို့နယျတှငျ ဧက ၃၀ ခနျ့ကို စိုကျပြိုးလုပျကိုငျနပွေီး စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ကသာခရိုငျ၊ ရှမျးပွညျတောငျပိုငျး ဘနျးယဉျ ကြေးရှာ၊ ကယာပွညျနယျ၊ ကရငျကြေးရှာအုပျစု ဆငျဖွူကြေးရှာတို့တှငျ ဘိနျးအစားထိုး သီးနှံအဖွဈ မွပေဲ စိုကျ ပြိုးနိုငျရေးကိုလညျး ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျး သိရသညျ။
“ ဆီထှကျသီးနှံ စိုကျပြိုးတဲ့ ဒသေတှမှော တောငျသူတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီးတော့ Pilot project တှေ ခှဲပွီးတော့ စိုကျပြိုးနသေလို မွပေဲစိုကျနညျးတှေ ရရှိအောငျ ထိုငျဝမျနဲ့ တရုတျပညာရှငျတှေ ချေါယူပွီးတော့ ဆှေးနှေး တာ တှေ ဆောငျရှကျပေးနသေလို တောငျသူတှကေိုလညျး ပွညျပခရီးတှေ စလှေတျပွီးတော့ လလေ့ာရေးခရီးတှေ စလှေတျသလို နောကျထပျလညျး စလှေတျနိုငျဖို့ ဆောငျရှကျနတေယျ” ဟု ဦးခငျစိုးက ပွောသညျ။
ယငျးအပွငျ ပွညျတှငျး ဆီနှငျ့ ဆီထှကျသီးနှံ ဖူလုံရေး၊ ကမျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျသော အရညျအသှေးမီ စားသုံး ဆီမြား ထုတျလုပျဖွနျ့ဖွူးနိုငျရေး၊ ပွညျတှငျးဆီစကျမြား၏ လုပျငနျးမြား ရှငျသနျဖှံ့ဖွိုးလာစရေေးတို့အတှကျ ရညျ မှနျးခကျြထား ဖျောဆောငျနကွေောငျး ၎င်းငျးက ဆကျလကျပွောဆိုသညျ။
ထို့ပွငျ မွပေဲစိုကျပြိုးရေးမှ စိုကျပြိုးတောငျသူမြား၏ အဓိကလိုအပျခကျြမြားဖွဈသော မြိုးကောငျးမြိုးသနျ့ ရရှိရေး ၊ စိုကျပြိုးနညျးပညာကောငျးမြား ရရှိရေး၊ စှမျးအားပွညျ့ စကျကိရိယာမြား သုံးစှဲနိငျရေး၊ ထိရောကျသော သှငျး အားစုမြား သုံးစှဲနိငျရေးနှငျ့ စြေးကှကျအာမခံခကျြ ရရှိနိငျရေးတို့အတှကျ စိုကျပြိုးတောငျသူမြားအား ပံ့ပိုး ကူညီမှု မြား လုပျဆောငျပအေးသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
လကျရှိတှငျ ကသာခရိုငျအတှငျး၌ ဆီထှကျသီးနှံ စိုကျဧက ကိုးသောငျးခှဲကြျော ရှိပွီး နှဈစဉျ တဈဧက အထှကျ နှုနျး တငျး ၄၀ ခနျ့သာ ထှကျရှိကွောငျး ကသာခရိုငျရှိ ဒုတိယခရိုငျမှူး ဦးကြျောစှနျဌေးက ဆိုသညျ။
“ အသငျးဘကျကနေ နညျးပညာ၊ စကျနဲ့ ငှကွေေး ပံ့ပိုးမှုတှေ လိုအပျတယျ။ တောငျသူတှကေလညျး မွပေဲနဲ့ ပတျသကျတာ အသငျးဘကျကနေ ဆောငျရှကျပေးတာတှကေို လိုကျပါဆောငျရှကျကွမယျဆိုရငျ ၀ငျငှတေိုးပှား လာဖို့နဲ့ မြိုးစလေို့အပျတာတှေ ဖွညျ့ဆညျးလာနိုငျမှာ ဖွဈတယျ” ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။
လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံတှငျ အမြားဆုံးစိုကျပြိုးသညျ့ မွပေဲအမြိုးအစားမြားမှာ စိပနျ၊ ရဆေငျး ရ၊ သိပ ၁၂၁၊ ထှနျ တာနီ၊ ကြောငျးကုနျး၊ ဂပြနျကွီး၊ ဆငျးပဒသော( ရ၊၈၊၉) မကှေးပငျပွနျ့နှငျ့ မကှေးမြိုး( ၁၀၊၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃၊၁၅) မြိုးတို့ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတှငျ မွပေဲ အစိုကျမြားဆုံး စိုကျပြိုးသညျ့ ဒသေမြားမှာ မကှေးတိုငျးဒသေကွီး၊ မငျးဘူးမွို့၊ စလငျးမွို့၊ ပခုက်ကူမွို့၊ ရစေကွိုမွို့၊ မွောငျမွို့တို့ဖွဈကွပွီး ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး၊ အငျပငျမွို့၊ ကွံခငျးမွို့၊ မွနျအောငျမွို့ စသညျ့ ဒသေမြား၌လညျး စိုကျပြိုးကွသညျ။
How to contact your organization ? Can i known contact number? Ph-09972899411
by Zaw Naing at December 19 2018